Ndezvipi zvinonzi Amazon zvakagadzirwa nehuwandu hwemashandisirwo ekutengesa zvikuru?
Zvakafanana neGoogle, Amazon yakagadzirisa kushandiswa kwegoridhi ine zvakawanda zvayo. Kwete kureva chakavanzika chinopoteredza chikamu chezvake dzimwe nguva uyewo chine mitambo mamiriro ezvinhu. Asi nhasi ini ndiri kuzobvisa kusanzwisisana kwose kwakabatana kuitira kuti iwe uzive chaizvo izvo zvinofanira kuitika kuitira kuti uchengetedze zvakanaka mumuiti weAmazon SERPs - comprar certificados de seguridad ssl.
Yatozivikanwa kare kuti injini huru dzekutsvaga dzakadai seGoogle dziri kushandisa kunze kwezvinhu kuti iongorore nzvimbo yekutsvaga nzvimbo ye peji rimwe nerimwe rakakonzerwa paIndaneti. Pakati pevamwe, Google's search ranking algorithm inonyanya kushandiswa pawebsite ye backlink profile, social media presence, webusaiti / domain domain, etc. Panguva imwecheteyo, zvisinei, Amazon maitiro akashandura algorithm iri kushandisa chete mukati mezvinhu pasina che-site SEO zvinhu zvakatorwa munyaya. Ndicho chikonzero Amazon inotarisa zvinhu zviri mukati, zvakadai sekutengesa chaiyo, zvishandiso zvakanaka, kushandiswa kwakakodzera kwemashoko uye kushandiswa kwemisi mikuru yekutsvaga (kakawanda, mumunda unotevera), kugutsikana kwekambani, kugutsikana kwekambani, kukwikwidzana kwemitengo, kuongorora kwevatengi , nezvimwe. Asi kuti unganzwisisa nenzira ipi iyo Amazon inotarisa michina kuita kuti dzako dzive dzakarongwa papeji yekutanga shure kwezvose? Pane inowanzogamuchirwa kushandurwa-based based approach kuAmerica chikwata chepamusoro, uye pasi ndiri kuenda kunokurumidza kumhanya kuburikidza nechepfupi yezvikamu zvayo zvikuru.
Kusiyana neGoogle ine maitiro anodarika mazana maviri, Amazon product yakagadzirwa nehurumende haisi iyo yakakosha. Muzvokwadi, zvinhu zvose zvakajeka - kana vanhu vakawanda vachiita bhodhi kuti vatenge newe, iyo yakashambadza yako yakagadzirwa mazita ichave yakarongerwa kuAmazon. Chinhu ndechokuti Amazon inongoda kuwedzera kutengesa. Saka, kana chigadzirwa chako chakatendeuka zvakanaka, chichangoita sechinhu chakafanana. Ndizvo!
Zvakare, tichifunga kuti maAmazon arikutsvaga kutengesa mamwe, kutengesa zvakanyanya kunotengeswa iwe,. Zvinoreva kuti zvinhu izvo zvakatengeswa zvakanyatsorongeka zvinongororwa pamusoro peSERPs uko. Uye havafaniri kunyatsogadziriswa kana kurongwa panguva imwe chete. Cherechedza, zvisinei, iyo maAmerica chigadzirwa chinonzi algorithm haigoni kungoita zvekutsvaga kwekutsvaga kwekutsvaga, asi iyo yakawanda yekutengeserana nhoroondo yawakawana sezvo yako yekutanga yakagadziridzwa kugadzirwa kwekutengeserana kune iyo.
Ngatitarisei - inzvimbo yakakwirira zvakanyanya kunyanya iyo michina ine kutengeswa kwakawanda inonzwisisika (kunyanya kubva pakuona kwemahombekiti aya paIndaneti). Uye izvi zvose pamusoro pebhizimusi chero ripi zvaro ratingafungidzira, zvakarurama? Kunyange, iyo ine imwe yeruzhinji yeAngers vatengesi. Ndinoreva kuti mamiriro ezvinhu akafanana neaya ane mawebsite ane magetsi akawanda. Taura zviri nyore, kukurumidza chigadzirwa chako chinotengeswa kuburikidza ne nguva yakangosvika (kutengesa basa), zviri nani uye kukurumidza kukusimudzira kusimudza iwe uchange uine. Somugumisiro, inogona kuva yakaoma chaizvo kutanga mutsara wezvigadzirwa kana kutsva paAmazon semutengesi wechidiki. Ndicho chikonzero dzimwe nguva kutanga neAnglish's sponsored products, kana PPC zvikava iyo nzira chete yekuputsa iyi ingadai iri "kuisa gap" uye kubatsirwa kunokonzera kukunda nekukurumidza kukurumidza kutengesa velocity.